Yiziphi izizathu zokungathembeki ngokomzwelo | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 13/09/2021 22:39 | Ubudlelwano
Iningi labantu livame ukuhlanganisa ukungathembeki nomkhakha wezocansi, Kodwa-ke, lokho okwaziwa njengokungathembeki ngokomzwelo nakho kungenzeka. Kulokhu, ukukhashelwa komlingani kwenzeka ngendlela ethintekayo. Lokhu kungathembeki okukhulunywe ngaye ngenhla kunzima kakhulu ukukuthola kunokuthembela ebulilini futhi kuvame kakhulu kunalokho ongakucabanga.
Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma ngalolu hlobo lokungathembeki, izimbangela zako kanye inganqotshwa kanjani.
1 Ukungathembeki ngokomzwelo noma okuthinta inhliziyo
2 Yiziphi izizathu zokungathembeki ngokomzwelo
3 Ungakunqoba kanjani ukungathembeki okungokomzwelo
Ukungathembeki ngokomzwelo noma okuthinta inhliziyo
Njengokungathembeki ocansini, ukungathembeki ngokomzwelo kuwukukhaphela okukhulu kwezithandani futhi imvamisa kuyimbangela yokuhlukana okuningi kwanamuhla. Ekungathembekini ngokomzwelo kunenkohliso ebhekiswe kumlingani, selokhu kwenzeka indlela engokomzwelo nehambelana nomuntu wesithathu. Ezimweni eziningi kakhulu, ukungathembeki okushiwo kwenzeka ngoba omunye wabalingani eyedwa ngokomzwelo.
Ukungathembeki ngokomzwelo kungadala ubuhlungu obukhulu kumuntu ohluphekayo. Kungabhekwa njengokubi kakhulu kunokungathembeki ocansini futhi ukuthi kukhona ukulahlwa okuphelele phakathi kwembhangqwana yesici esingokomzwelo nesinamandla. Inkinga enkulu ngalolu hlobo lokungathembeki kungenxa yokuthi kunzima kakhulu ukukuthola kunokungathembeki ocansini.
Kunezizathu eziningi noma izimbangela ezingaholela umuntu ekukhohliseni ngokomzwelo kumlingani wakhe. Ukuntuleka kokuxhumana nokungakwazi ukuveza imizwa ehlukile, kungenza umuntu anqume ukuthola uthando ngaphandle kobuhlobo. Ukushoda kwezimpawu zothando noma ukuthandana kwabashadayo imvamisa kungenye yezimbangela zalolu hlobo lokungathembeki. Khumbula ukuthi uthando kumele lunakekelwe nsuku zonke futhi kwesinye isikhathi ukungabi nesikhathi kwenza abantu abaningi bagcine bengabunaki ubudlelwano babo nabanye abantu.
Ukujayelana nokuziphatha komuntu oyedwa phakathi kwezithandani kungenye yezimbangela ezivame kakhulu zokungathembeki ngokomzwelo. Ingxenye ehlushwa isithukuthezi, unquma ukubheka ngaphandle okuthile angenakho ebudlelwaneni. Into ejwayelekile ukuthi uma abashadikazi bephilile futhi kunokuxhumana okuhle phakathi kwalaba bobabili, ukungathembeki ngokomzwelo okukhulunywe ngakho ngenhla ngeke kuze kwenzeke.
Ungakunqoba kanjani ukungathembeki okungokomzwelo
Njengakwezocansi, kunzima kakhulu ukunqoba ukungathembeki okungokomzwelo. Kwezinye izimo, le nkohliso imvamisa isho ukuphela kombhangqwana futhi kwezinye izimo, kwenziwa umzamo wokuthola izixazululo zokonga ubudlelwano. Kubalulekile ukuqala kabusha ukuxhumana okuhle futhi ukhulume izinto ngokucacile nabashadikazi.
Ekuqaleni kungaba nzima impela kepha kubalulekile ukubeka eceleni intukuthelo, intukuthelo noma intukuthelo bese uzama ukuvula ikhasi ngokushesha okukhulu. Ukucela ukuthethelelwa nokwamukela ukuxolelwa kubalulekile futhi kubalulekile, ukuze izithandani zikwazi ukugingqa futhi ngaphandle kwenkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Yiziphi izizathu zokungathembeki ngokomzwelo